July Dream: Because you're special
Posted by JulyDream at 9:38 PM
Because you're special, i came here in time.
HAPPY BIRTHDAY, JULY DREAM!
ဒီနေ့က ကျွန်တော့် မွေးနေ့မှ မဟုတ်သေးတာ။ ဒွတ်ခ...
မွေးနေ့ကို သိချင်ရင် ဘလော့ထိပ်ဆုံးက ပို့စ်တွေကို သွားဖတ်ကြပါဗျို့။
post တင်ပြီးတောင်းရင် ဆာလာအိပ်နဲ့တောင် ရဦးမယ်
မွေးနေ့ေ၇ာက်ပြီလားဗျ ဘာမှလဲ မပြောဘူး
ဘယ်နေ့လဲ ပြောပါ အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် စာတပုဒ်ရေးထားတာရှိတယ် မတင်ခင် ပေးဖတ်မယ်။ မကြိုက်ရင်ပြော ဖျက်ပေးမယ်။
လုံလနဲ့ ဇွဲ မလျှော့ဘဲ အမြဲ ကြိုးစားမယ် ဆိုပါတော့....
မေတ္တာက မစစ်လို့ နေမှာပေါ့ :p
မေတ္တာဆိုတာ တုံ့ပြန်မှုကို မမျှော်လင့်ရတဲ့ unconditonal love လို့ နားလည်ထားတာ။
အမှတ်မှားတာများလားလို့ အခု ပြန်တွေးနေတယ်။
ကိုယ့်မွေးလမှာ ph in myanmar မှာ ပထမဆုံး ပို့စ်တင်ပေးတဲ့ အတွက် အလွန်ကျေးဇူး။
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းသော မွေးလ ဖြစ်ပါစေလို့ လူလည်ကျပြီး ဆုတောင်းပေးသွားတယ်။
မျော်လင့်မထားပဲနဲ့ ရရင် ပိုဝမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်..။ မွေးနေ့ ကဒ် လေးရတော့ ကိုယ့်မွေးနေ့ ကိုမှတ်မှတ်ရရ ရှိပါလား ဆိုပြီး ပိုကြည်နှုးစရာကောင်းပါတယ်..။ ပျော်ရွင်ပါစေ...။
ချစ်သူလေးက ပေးတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ကွန်ပြူတာ သိပ်နှေးနေလို့ အရှေ့က ပို့စ်တွေကို သွားဖို့နေနေသာသာ ဒီကိုလာဖို့ကိုတောင် အကြာကြီး စောင့်ရတယ်။ မွေးနေ့က ဘယ်တော့လဲ။ ဇူလိုင်လဟာ ကျွန်မအတွက် အမှတ်တရတွေ သိပ်များတဲ့လ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မသားလေးလည်း ဒီလမှာပဲ မွေးတယ်။ PHinMM မှာ ပို့စ်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
ဂျစ်တူးလဲ ပို့စ်ကဒ်လေး ပေးတာ ၀ါသနာပါတယ်...။
ဂျစ်သူငယ်ချင်းတွေကို ဂျစ်ဘယ်နိုင်ငံသွား လည်လည်
အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်မဲ့ ပုံပါတဲ့ ပို့စ်ကဒ်လေးတွေ ၀ယ်ပြီး ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို စာတိုက်က ပို့ပေးတတ်တယ်....။
သော့ချိတ်လေးတွေ .....အမှတ်တရရှိတယ်လေ ...။
အမြဲကံကောင်းသောသူ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး
မွေးနေ့လက်ဆောင် online ကနေ eမေတ္တာတွေ အများကြီးရပါစေဗျာ :P
ပို့စကတ်လေးရဲ့အထဲကမှ ဒီပို့စ်ရဲ့ အသက်လို့ထင်မိတယ်..ဒါပေမယ့် အိမ်ရှင်ကဖွက်ထား
တော့ မြင်သလောက်လေးပဲ ကြည့်ပြီးပြန်သွားပါတယ်..။
ကိုယ်ကလည်း အမှတ်တရလက်ဆောင်ရရင် သိပ်ဝမ်းသာတယ်။ ကိုယ်လည်းကြိုက်တတ်တဲ့ အရာမျိုးကို ပေးတဲ့သူတွေက အသေအချာ အချိန်ပေးပြီး စဉ်းစားရတာဆိုတော့ အဲဒီအချိန်လေးအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်မိတတ်တယ်။
နောက်နောင်တွေမှာ မေတ္တာတွေ ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပါစေဗျာ။
မေတ္တာရောင်ပြန်ကဒ်လေးအတွက် ဝမ်းသာပါတယ် ကိုဂျူလိုင်ရေ။ Happy Birthday ပါ (အခုမှ စာတွေလိုက်ဖတ်နေရလို့ belated birthday wish ဖြစ်သွားတာတော့ တကယ် Sorry ပါနော်း)